Iska daawo Rattlesnakes iyo ka fogow Snakebites
Cayaaraha Caafimaadka & Ammaanka
Ka daawo Rattlesnakes markaad fuulaysid
Iska ilaali Snakebites at Base Cliff
Haddii aad tagto dhagaxa dhagaxyada oo aad u socoto meelo badan oo Maraykanka ah inta lagu jiro bilaha kuleylaha ah, badiyaa Abriil ilaa Oktoobar, ugu dambeyntii waxaad la kulmi doontaa raxsheeyn ku socota raadsasho, saldhig xagga xargaha, iyo xitaa dhinaca wadada kor u xajmiga ama sare ee qashinka . Marka aynu ka soo baxayno fuulitaanka iyo qulqulka, waxaan inta badan ku gudbinaynaa rattlesnakes iyaga oo aan ogeyn iyaga.
Rattlesnakes waxay rabaan inaan ka fogaano
Maydka dhif ah ayaa la arkaa maxaa yeelay waa kuwo si qurux badan loo duubay, sababtoo ah inta badan ma naga jejebin, iyaga cabsiin, ama waxay dareemaan qarsoodi.
Rattlesnakes waxay leedahay sumcad xumo aan qumaneyn oo qaniinyo yar ah laakiin badanaa waqtiga ay u eg yihiin hareerahooda iyo runtii ma rabaan in ay la kulmaan dadka dhow. Way ogyihiin inaanu aad u weynahay in aan wax cunno. Rattlesnakes badanaa waxay ku baxaan ganacsigooda maalin walba, iyagoo isku dayaya inay helaan jimicsi dhadhan leh-ama-jour, ama qoryo qorraxda ku jira ama duurka ka hooseeya.
Inta badan qaniinyada Rattlesnakes
In ka badan 7,000 oo qof sannadkii ayaa yara yaraatay masaska aabaha ee Maraykanka, iyada oo qiyaastii 12 sano oo dhimasho ah, oo badanaa laga qaniinyo qorraxda jilicsan ee bariga iyo galbeedka iyo boqolkiiba 99% xagasha cawska ama xubnaha Crotalidae oo ay ku jiraan rattlesnakes, copperheads, and cottonmouths ama moosaasin biyo ah. Cuna qabateyaal ayaa lagu magacaabaa godadka xasaasiga ah ee u dhexeeya indhahooda iyo sanka oo u oggolaanaya inay dareemaan prey. Waxaa jira qiyaastii 120 nooc oo dabiici ah oo ku yaal Maraykanka iyo 20 ka mid ah ayaa ah sun. Maydhayaasha sunta waxaa laga helaa qiyaasaha hoose ee 48 gobol oo kala duwan; Kaliya Alaska iyo Hawaii ma heystaan.
Fursadaha waa Slim in aad ka dhimanayso Snakebite
In kasta oo aan la kulmi karno rattlesnakes iyo copperheads marka aynu ka soo baxayno dhagax weyn, fursada helitaanka snakebite waa mid hooseeya oo fursada ah in laga dhimo snakebite ee Maraykanka waa 1 10 milyan. Waxaad u badan tahay in aad u dhimato shinbiraha shinbiraha ama iftiinka iftiinka ka qaniinyada qaniinyada.
Haddii aad ku yar tahay rattlesnake, waxaa lagu raaxeeyaa in la ogaado in ku dhowaad kala badh qaniinyada oo dhan waa "qaniinyo qallalan," taas oo ah xinjir aan la isku durin. Cuna qabatayaasha cayayaanka ah waxay leeyihiin fangasyo bannaan oo dib u celiaya oo afka dib loogu celiyo. Way ogyihiin in aad aad u weyn tahay in lagu qarxiyo halkii laga yaabo inay khatar galinayso fekerkooda, waxay qaniinaan iyaga oo laabta laabta.
Aqoonsiga Meelaha Meelaha Yaryar ku nool
Haddii aad waqti badan ku bixiso inaad dibadda u soo baxdo, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid oo aad garatid meelaha masaska ah. Abaalmarinada waxaa badanaa laga helaa meelo ay ku cunaan cunto iyo sidoo kale meelo ay ku kulmi karaan. Weydiistaa sida dabaylaha dhagaxa leh ee ururiya kuleylka. Raadi jiilaalka ka hooseeya dhagxaan ku yaal hooska ama meelaha dusha sare ee dhagaxa ah halkaasoo ay ku ridi karaan qoraxda. Abaalmarinta waxaa badanaa laga helaa buraashka webiyada iyo hoosteeda oo ay cunto yihiin sida abeesada kale, qorraannada, iyo jiirarka oo dhami.
Samee Xidib Qafafeed ah
Iska ilaali jilbaha qashin qubka, dhagxaan dhagaxyada, iyo taariikhda hore. Haddii aad ku soo dhaadhacdo xargo leh qashin yar iyo qori yar, fiiri meesha aad cagahaaga dhigto. Haddii aad ku jirto duufaan aad u hooseeya oo hoos u dhac leh meelaha sida Arizona iyo Utah, waxaa laga yaabaa inaad dareentid in la ilaaliyo haddii aad qaadato ulo shan cagood oo dheer ah si loo baaro aagagga xiisaha leh.
Waxaan bartay qiimaha farsamadan marka aan ku khasbanaaday in aan ka gudbo marxalado aan dhamaad lahayn oo ku wajahan qaabka Faransiiska ee Tasmania. Ka hor inta aan laga jiidin jasiirad hal cagaaran oo kale, waxay ahayd mid caqli-gal ah in cawska laga toogan karo si loo hubiyo in maskaxda lix-labbo-dheer ah ee aan sunta lahayn ayan guriga joogin.
Talooyin looga hortagayo qaniinyada Snakebite
Rattlesnakes, nooca caadiga ah ee masaska sunta ah ee aad la kulmi doonto, kaliya weerarka marka lagu hanjabo. Tani waa marka ay la yaaban yihiin, ku sii socdaan, fadhiisteen, oo la maareynayay. Eeg meesha aad gacmahaaga iyo cagahaaga gashid haddii aad ku barbaareysid dhulalka dhagaxa. Raadi jiilaalka hooska mugdiga ah ama duurka ka sareeya dhulka kulul inta lagu jiro xagaaga. Ha isku dayin inaad soo qaadato maskaxo sun ah. Taasina waa sida ugu dhaqsiyaha badan ee loo helo. Haddii aad la kulantid abeeso ha ku dilin. Xasuuso inaad booqanayso guriga kuwan qurxoon ee quruxda leh.
Rattlesnakes waa inta ugu badan ee abid loo yaqaan 'Venomous Snakes'
Rattlesnakes ayaa ah kuwa ugu caansan uguna nugul ee Maraykanka. Inta badan dadku waxay ku badan yihiin Koonfur-bari iyo Koonfur-galbeed. Waxaa jira 16 nooc oo kala duwan oo Mareykanka ah, waxayna si aad ah u kala duwan yihiin dhererka, midabka, qaabka iyo calaamadaha, iyo qatarta khatarta ah ee ay dadku ku badan yihiin. Noocyada yar ayaa ka badan afar dhudhun dhererkuna waa saddex ka badan lix cagood. Rattlesnakes ugu khatarta badan waa barafka bariga ee Florida iyo xeebaha koonfureed ee koonfureed; Dhuumaha gawaarida reer galbeedka ee Texas iyo Koonfur-galbeed; iyo Mojave ayaa qaybo ka mid ah Utah, Nevada, Arizona, iyo California. Rattlesnakes waxay ku tiirsan yihiin midabkooda iyo qaababka loogu talagalay gogol-xayawaanka, isku-laabashada caleemaha dhulka dabiiciga ah ama dhagaxyada xagasha. Waxay badanaa isku dayaan inay ka baxaan bini-aadanka iyaga oo isku xoqaya hoostooda ama hareeraha oo ay dareemaan digniin si ay u guuraan. Waxay kaliya qaniinaan sida ugu dambeeya laakiin ma had iyo jeer ku dhicin ka hor inta aan la dhicin.
Meelaha ugu Fududeysan ee Meelaha La Xidhxidhay
Meelaha fuulaya ee aad u badan tahay inaad la kulanto masaska sunta waa:
West Virginia: River River Gorge , Seneca Rocks
New Mexico: White Rock, Mountains
Colorado: Shelf Road, Penitente Canyon, Flatirons, Canyarta Eldorado, Castlewood Canyon
Utah: Deegaanka Moab , Seerta National Park , St. George
Arizona: Iskuday Stronghold, Buur Lemmon, Queen Creek, Canyon Canyon, aagga Phoenix, Buuraha Qudheeta
Kaliforniya: Park Joshua National Tree , aagga Bishop
Idaho: Magaalada Dhagaxyada
9 Talooyin Ammaanka ah si aad uga gudubto Webiga ama Socodka
Sidee lumisaa culeyska dabaasha
Miyuu Dabbaal u yahay Habka ugu Fiican ee Miisaanka Loo Joogo?
10 Tilmaamo ah inaad ku Badbaadin Halka Maareynta Rock
Kombiyuutarada Anabolic iyo Catabolic ee Jidh-dhiska
Dabaasha Dabaasha ee Xanuunka Dhaawaca iyo Dhaawaca
Maxay Tahay Inay Diyaargareeyayaashu Cunnoodaan Ka Hor Kulankooda Dhibaatada Ku Xiga?
Cuntada ugu fiican ee jimicsiga la kulma
Waa maxay Dhegaha Swimmer?
Tilmaame 7 Noocyada Dhaqameed ee Lightsaber ku Dagaalanka 'Star Wars'
Caqabadaha caadiga ah ee Ingiriisku - Waxay la mid yihiin iwm
Sida Loogu Fiiriyo "Danser" (qoob-ka-ciyaar)
Ethnoarcheology - Qaniinaynta Cilmiga Dhaqanka iyo Arkeoloji
Waa maxay Fataha Talaadada?
Sidee loo badalaa taayirada mootada
Aagga loo yaqaan "Electronic Domains" iyo "VSEPR"
Magaalooyinka Tlatelolco ee magaalada Mexico
Iska Jarida Gacmaha Lagu Sameeyo Star Wars
Daahfurka ee Padawan, Jedi Apprentice
Qeexitaanka Kooxda Carboksil iyo Tusaalooyin
Diyaarinta MCAT Prep ee Loogu Tartamayo Ma'aha
Sidee Jazz u saameysey Hip-Hop
Hababka Araajida Qaabka
Sida Loo Helo Kaadhka Medicare Beddelka ah
8 Talo-baaris waxbarasho si aad isugu diyaariso imtixaanka
Isku xidhka 'Volver'
Tirada ugu weyn ee dadweynaha
Warbaahinta Bulshadu waxay la kulmeysaa muwaadiniinta fasalka 21-aad
10 Waa in la daawado filimyada ku saabsan daroogada
Xusuus qorka shaqaalaha Grand
Talyaani Idioms iyo Hadalooyin Isticmaalida Qaadashada Fiiliga
Taariikhda Art 101: Farshaxanimada